Mayelana NATHI - Chengdu Zhihongda Nonwoven Bag Co., Ltd.
I-Chengdu zhihongda nonwoven bag Co., Ltd. esungulwe ngo-2013, itholakala eChengdu, eningizimu-ntshonalanga yeChina, ikakhulu ebandakanyeka ezikhwameni ezingezona ezelukiwe, esikhwameni sikakotini, esikhwameni se-canvas, esikhwameni se-polyester, esikhwameni esigoqekayo, esikhwameni esino-laminated, esikhwameni sezintambo, izikhwama ezipholile, izikhwama zezingubo, eminye imikhiqizo engalukanga nomkhiqizo wokupakisha we-eco. Kungumsebenzi wokukhiqiza ohlanganisa idizayini, i-R & D, ukukhiqizwa kwezikhwama kanye nensizakalo, nokunikeza izixazululo zesikhwama se-Eco ezihlanganisiwe.
Sine iminyaka engaphezu kwengu-10 nakho professional ekukhiqizeni Eco-izikhwama. Sinikeza izikhwama ze-Eco ezimakethe zasendaweni nokuthekelisa ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, njengeYurophu, iMelika, iCanada, i-Australia, iJapane, iSingapore, njll., Siyiqembu eliqeqeshiwe le-oda lakho le-OEM ODM. Kuma-oda we-OEM, singasiza ukwenza zonke izinqubo zokukhiqiza, kusuka kumqondo kuya kumkhiqizo wokugcina, ngokushelela; kuma-oda we-ODM, kunezinketho eziningi ongazikhethela zona.
Izikhwama zethu zi-eco-friendly futhi zihlala isikhathi eside, kuyindlela enhle yokukhangisa emgwaqweni. Isikhwama sedizayini esiyingqayizivele sizokulethela izinzuzo ezingapheli kusuka ekukhushulweni nasekusungulweni komkhiqizo, kuqinisa njalo umkhiqizo wakho’s lapho usebenzisa. Inkampani yethu iphikelela ukusebenzisa izindlela zokuphrinta ezinobungani bemvelo nezindwangu ezenziwe kabusha nezisimeme zezikhwama zethu.
U-CHENGDU ZHIHONGDA uzoba yi-TOP ONE embonini yezikhwama ze-eco. Umgomo wethu ukuhlinzeka ngezikhwama zekhwalithi engcono ngentengo ephansi yamakhasimende ahlukahlukene emhlabeni jikelele. inhloso yethu ukusiza amakhasimende ethu ukusungula isithombe esihle somkhiqizo nokuvikela imvelo. Sithanda ukwamukela izidingo nemibono yamakhasimende ethu ahlukahlukene, ukuze siqhubeke nokwakha izikhwama ezintsha ze-eco zamakhasimende ethu. Sinikeza izinsizakalo zobuchwepheshe kumakhasimende ethu ukonga isikhathi nezindleko zawo ezibalulekile.
UChengdu zhihongda unemishini ephelele yokwenza izikhwama ze-eco, ubelokhu aphishekela imodi yokukhiqiza okuzenzakalelayo nokuthunga okukodwa okukodwa. Ithuthukise umshini wokuphrinta we-gravure wemibala eyisishiyagalolunye, umshini wokulaminetha, zonke izinhlobo zemishini yokuthunga, mayelana nabasebenzi bokuphrinta besilika besikrini abangama-106 nabasebenzi bokuthunga.
Ithimba lethu lokuthengisa lazi kahle izidingo ezenziwe ngokwezifiso zamakhasimende ethu, njengosayizi wesikhwama se-eco, ilogo & ukuphrinta kwephethini, ukukhethwa kwendwangu, Ukukhethwa kwenqubo, njalonjalo. Sisebenza namakhasimende ethu ukwenza konke okusemandleni ethu. Isikhathi sokulethwa sibaluleke kakhulu kithi, ngoba asikwazi ukuphuthelwa yizinsuku zokusebenzisa zamakhasimende ethu. Uma kunesimo esiphuthumayo ekukhiqizeni, sizokwazisa nekhasimende ngesikhathi.
Eminyakeni ethile edlule, abathengisi emhlabeni wonke babesetshenziselwa ukuhlinzeka ngamakhasimende amapulasitiki amahhala. Lolu hlobo lokusetshenziswa kwesikhwama sepulasitiki kunzima ukwehliswa isithunzi iminyaka eyikhulu futhi luchazwa ngokuthi "ukungcola okumhlophe". Othandweni lwemvelo nezikhwama zama-tote, sisungule inkampani "iZhihongda" ukuphakela izikhwama ze-eco-friendly emakethe.
Igama lenkampani yethu "uZhihongda" lithemba ukuthi singabambisana ukudala indawo yokuhlala enhle, ukufeza umsebenzi wethu wenkampani.
Impilo yethu yansuku zonke idala ukungcoliswa kwemvelo. Kungumsebenzi wethu ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo okungenzeka. Ekuthuthukiseni nasekwethuleni imikhiqizo emisha, sihlala siyinaka inkinga yezemvelo. Eminyakeni edlule, besibhekene nobunzima obuningi futhi sibonga ukwesekwa okuvela kumakhasimende ethu.
Incazelo ye-Eco Bag
Izikhwama ezinobungani be-Eco zenzelwe futhi zakhiqizwa ukuze zisetshenziswe kabusha, zinciphise futhi zisetshenziswe kabusha.
Phinda usebenzise kabusha
Nonwoven Bag: kukonke, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-100.
Isikhwama Sokotini: kukonke, isikhwama esisodwa singasetshenziswa kabusha izikhathi ezingaphezu kwama-200.
I-Canvas Bag: kukonke, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-400.
Isikhwama Selineni: kukonke, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-500.
Inayiloni Isikhwama Esigoqekayo: kukonke, isikhwama esisodwa singaba ngaphezu kwezikhathi ezingama-300.
Isikhwama Esiyinyene Esiqinile: kukonke, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-500
Laminated Nonwoven Bag: kukonke, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-200.
Laminated Nokwelukiweyo Bag: Ngokuvamile, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-300.
Camera Iphepha BagNgokuvamile, isikhwama esisodwa singasetshenziswa futhi izikhathi ezingaphezu kwezingu-30.
Ukotini Wendwangu Yesikhwama: 100% impahla yemvelo, kungaba yi-biodegradation ekugcineni ngemuva kokulahlwa.
Isikhwama Selineni: 100% impahla yemvelo, kungaba yi-biodegradation ekugcineni ngemuva kokulahlwa.
I-Kraft Paper Bag: 100% impahla yemvelo, kungaba yi-biodegradation ekugcineni ngemuva kokulahlwa.
Nonwoven Bag: Impahla ye-PP engeyona enobuthi futhi engenaphunga, izokwehliswa cishe ezinyangeni ezintathu ngemuva kokulahlwa, iqala ukwehlisa isithunzi bese iba izimpushana futhi ihlangane nemvelo ngemuva kwezinyanga eziyi-12.
Laminated Bag: Akuyona into enobuthi futhi ayinaphunga le-PP, izokwehliswa cishe ezinyangeni ezinhlanu ngemuva kokulahlwa, iqala ukwehlisa isithunzi ibe yimpuphu bese ihlangana nemvelo ngemuva kwezinyanga eziyi-18.
Isikhwama Esingeluki: 10% -30% wezithako zivela ezintweni ezenziwe kabusha ze-PP. Isengaphinde yenziwe kabusha uma iphathwa kahle.
Izikhwama Ezilukiwe: 20% -50% wezithako zivela ezintweni ezenziwe kabusha ze-PP. Isengaphinde yenziwe kabusha uma iphathwa kahle.
Izikhwama ze-PET: 80% -100% wezithako zivela emabhodleleni epulasitiki asetshenziswe kabusha. Isengaphinde yenziwe kabusha uma iphathwa kahle.
ISAMPULA LAMAHHALA ESITOKWINI! Silangazelela ukuthola izidingo zakho ezithile, amasampula nokuphrinta kwephethini. Sicela uxhumane nethimba lethu lochwepheshe ngokushesha!